२५ पुस, काठमाडौं । युवा पुस्ताका साहित्यकार तथा लेखक युग पाठक संसद विघटनसँगै नागरिक अभियन्ताका रुपमा देखा परेका छन् । नागरिक समाजलाई गोलबद्ध गर्दै उनी अहिले राजधानीको सडकमा नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अबको केही महिनामा ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत पहिचानका पक्षधरहरु जाग्ने र आन्दोलनको आँधिबेहरी उठ्ने पाठकको विश्वास छ । उनी भन्छन् ‘अहिले जनता सुतेको सिंहजस्तै छन्, उनीहरु जाग्छन् ।’
नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) ले गरेको आन्दोलनमा युवापुस्ताको आकर्षण खासै नदेखिएको पाठक बताउँछन् । कांग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरुले युवापुस्ताको विश्वास जित्न नसकेको, तर नागरिक आन्दोलनमा भने युवापुस्ताको आकर्षण देखिएको पाठकले बताए । युवा पुस्ताको विश्वास जित्नका लागि कांग्रेस र नेकपाजस्ता पुराना दलहरु सच्चिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रस्तुत छ, नागरिक अभियन्ता पाठकसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–
तपाई साहित्यकारबाट आन्दोलनकर्ता, नेता बनेको देखियो नि ?
नेता भनेको विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै हो । तर, नागरिक आन्दोलनको हकमा यही एकजना नेता हो भन्ने तोक वा कुनै विशेष संयन्त्र हुँदैन । अहिले हामी केही साथीहरू नागरिक अभियन्ताका रूपमा छौं । जस्तै : नारायण वाग्ले, मोहना अन्सारी, सञ्जीव उप्रेती, रीता साहलगायतका साथीहरू छौं । यो टिम केपी ओली सरकारले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ होमिरहँदा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता र चासोले आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
तपाईहरुको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्यो ?
ससंद विघटन हुनेबित्तिकै सबैलाई डर र चिन्ताको अनुभूति थियो । केपी ओली पक्षकै मानिसलाई पनि अब के हो भन्ने डर व्याप्त थियो । सबैतिर एक प्रकारको सन्नाटा थियो । यसैबीच, हामीले नागरिकहरूको भेला गरेर विज्ञप्ति जारी गर्यौं । त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन घोषणा गर्यौं । साथै विगत दश वर्षदेखि प्रतिगमन चलिरहेको छ भन्ने किटान गर्यौं । ती सबै प्रतिगमनको ‘क्लाइमेक्स’ संसद विघटन हो । जसले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीतामाथि खतरा उत्पन्न गराएको ठहर गरेपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्यौं ।
आठ दिनको अवधिमा पाँचवटा सडक प्रदर्शन भए । त्यो नाटक प्रदर्शनी, कविता वाचन, सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा अभिव्यक्तिमार्फत गर्यौं । किनभने, संविधानले मान्यता नदिएको कुरा कसैको आदेशका भरमा भएको छ । यो त जनताको रगत–पसिनाले आर्जेको गणतन्त्र हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आदेश दिएको भरमा चल्ने गणतन्त्र त होइन । आज प्रधानन्यायाधीशलाई पनि आदेश दिने स्तरमा पुर्याइएको छ ।
तपाईको विचारमा ओलीले थप प्रतिगामी कदम चाल्ने सम्भावना पनि छ ?
सम्भावना छ । पहिले पनि त्यो सम्भावना थियो । तर, नागरिक आन्दोलनले आम जनतामाझ ओलीको कदम प्रतिगमन नै हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सफल भएका छौं । नत्र भने उनीहरूले थप प्रतिगामी कदम चालिसक्ने थिए ।
विस्तारै राप्रपाले राजावादी जुलुसमात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहको एकता दिवसका नाममा मनिषा कोइरालालाई नै अगाडि सारेको छ । यो सेन्टिमेन्ट हेर्दा सारा राज्यसत्ता ‘हेर यो राज्य हामीले कसरी जितेका थियौं’ भनेर देखाउने स्पर्धामा छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भाषामा भन्दा यहाँ प्रदेश भंग गर्ने, धर्म निरपेक्षता हटाउने ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भएको छ ।
यहाँले राजावादी/हिन्दुवादीको कुरा गर्नुभयो । यो केपी ओलीसँग कहाँ जोडिन्छ ?
केपी ओलीको राजनीतिक विशेषता नै धर्मनिरपेक्षता विरोधी देखिएको छ । उहाँले राम मन्दिरको उद्घोष गरेर संघीयताविरोधी भएको प्रमाणित गरिसक्नुभएको छ । त्यसमाथि सिडियोलाई बलियो बनाउने विधेयक ल्याएर प्रदेश सरकारलाई त पङ्गु बनाइसक्नुभयो । राजनीतिकरूपमा पनि उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को जुन फ्रेज छ, त्यो शब्दावलीलाई नेपाल सरकारमात्र बनाइसक्नुभयो । उहाँको यो कदम प्रतिगमनमात्र होइन, नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने तथा राजतन्त्रको चरित्र बोक्नेसम्मको देखिन्छ ।
राजावादीले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका हुन् या उनीहरु मिलेका हुन् ?
केपी ओलीको मनसाय मिलेर जाने नै देखिन्छ । तर, समयले त्यो स्वीकार गर्दैन । उहाँमा हिन्दु राज्यको जनमत धेरै छ भन्ने भ्रम छ । त्यो कसरी देखिएको छ भने नेपालमा एउटा ‘खास समुदाय’लाई बोल्ने मुख, औजार र मिडिया दिइएको छ । यसैले हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थाको नारा बोल्नेको संख्या धेरै देखिएको मात्र हो । तर, ठूलो जनसंख्या कसको छ भनेर हेर्नुभयो भने त्यो आदिवासी, जनाजाति, दलित र महिलाको छ । उत्पीडित समुदायको छ । त्यही संख्यामा मधेसी समुदाय पनि छ । यति ठूलो जनसंख्याभित्र राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने कुरा आयो भने २०६२/६३ को आन्दोलनको जगसमेत भत्किन्छ । जसरी गुठी आन्दोलनमा जनताको ठूलो पंक्ति बाहिर आएको थियो, त्यसरी नै जनता आउँछन् । जनताको ठूलो संख्या सुतेको सिंहजस्तो भएर बसेको छ । त्यो पंक्ति उठ्यो भने आँधिबेहरी आउँछ ।
सिंह भनेको जनता हो । जनता उठेपछि यहाँको सबै कुरा फेरिन्छ । यहाँका केही मानिसलाई राणा शासनभन्दा पहिलादेखि आफैंले सम्पूर्ण राज्यस्रोत, साधन, शक्ति पार्ने खेल चालिएको छ । त्यो सत्ताको खेलमा निरन्तरता दिन चाहेर गणतन्त्रमा पनि संकट आएको हो । दुईतिहाइमा त संकट नआउनुपर्ने हो नि । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाइ सरकार उही गोर्खाली राज्यसत्ताको धारामा चल्न थाल्यो । शाह वंशमा त सधैं संकट आएको छ भने, शाह वंशको जस्तै काम गरेपछि यो सरकार फसेको हो । गोर्खाली सत्ताकै निरन्तरता दिन खोज्यो भने अब आउने सरकार पनि कति टिक्छ भन्ने प्रश्न आउँछ ।
२०६२/६३ को आन्दोलनले पनि सत्तामा यिनै दल फर्किएर आए । तपाईंहरूको नागरिक आन्दोलनले माधव–प्रचण्ड या देउबा नै आउने हो कि भनेर युवापुस्ताले तपाईहरुलाई भनेका छैनन् ?
यही कारणले त हामीले संसद मात्र फिर्ता आउनुपर्छ भनेका छैनौं । समाजको सम्पूर्ण शक्ति, राज्यसत्तामा हुने परिवर्तन चाहिएको हो । राज्यसत्ता र जनताका बीचमा संसद विघटनको दुर्घटनाले घाउ बनाइसक्यो । त्यहाँ उपचार गर्दा १० वर्षमा भएका प्रतिगमनका श्रृंखला सच्याउनुपर्छ । अर्थात्, दलहरू सच्चिएर आउनुपर्छ । दलहरूलाई अर्को राजनीतिक ढोका खोलिदिन हामी सडकमा आएको होइनौं !
यसर्थ, प्रतिपक्षका दलहरूसँग नागरिक समाजको सहकार्य छ । तर, आजको प्रतिगमनसम्म आइपुग्दा धेरै मामिलामा दलहरू नै दोषी भएकाले उनीहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । आज केपी ओलीलाई यति स्वेच्छाचारी बनाएको नेकपाले नै हो नि । सरकारको कामलाई चेक गर्नुपर्ने कांग्रेस पनि मौन बसेर धेरै नराम्रा कामलाई सघाएको हो । यसमा उनीहरूले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ भन्ने खबरदारी गरिरहेका छौं ।
भनेपछि, अहिले राजावादी जागेको, पहिचानवादीचाहिँ सुतेको स्थिति हो ?
हो । अवस्था यस्तै देखिएको छ । प्रतिगमन कहिलेदेखि भन्दा, हामी पहिलो संविधानसभा विघटनदेखि यतालाई भन्छौं । किनभने, पहिलो संविधानसभा निकै समावेशी थियो । त्यसयताको लडाइँ एकथरि हिन्दुराष्ट्र र अर्को पहिचानवादीको बीचमा भयो । त्यही समयमा मधेस आन्दोलन भयो । जनजाति आन्दोलन भए ।
यी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले विचारको कुरालाई विशुद्ध प्राविधिक बनाइदिएका छन् । उनीहरूले विचारलाई ठीक ढंगले स्थापित गर्न सकेनन् । विभेदको उपचार खोज्नेहरू नै नयाँ केपी ओलीका रुपमा उदाए । आन्दोलनको गति कम भयो । तर, सुतेर बसेकाहरूको पनि सर्वश्व सकिने भयो भने त मान्छे उठिहाल्छन् नि !
वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?
निर्वाचन गर्नका लागि होइन, देखाउनका लागि घोषणा गरिएको हो । केही समय प्रधानमन्त्री हुन चाहेको भए केपी ओलीले आफ्ना सह–अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै मनाउन सक्थे । तर, यो भागबण्डाको भन्दा बढी विचारको कुरा हो । विचार नमिलेपछि संकट आइपुग्यो, जुन ओलीले थेग्न सकेनन् ।
नागरिक आन्दोलनको गति सुस्त देखिँदा सत्ता पक्ष खुसी देखिएको छ भनिन्छ नि ?
आन्दोलन उठ्ने भनेको एकैचोटि बालुवाटार उडाइदिने भन्ने होइन । स्वयं उनीहरूले पनि यो प्रतिगमन कहाँसम्म लैजाने भन्ने दाउमा छन् । यता आन्दोलन पनि बिस्तारै गतिशील भएर उठ्ने क्रममा छ । उनीहरूले निरन्तरता दिन खोजे भने झन् विद्रोह हुन्छ । ठूलो समूह अदालती निर्णय कुरेर बसेको छ । यसैले, नागरिक आन्दोलनलाई कम आँक्ने कुरा आउँदैन ।
तपाईंहरूको निश्पक्षतामा प्रश्न उठ्दैन ?
जस्तै– हामी राजावादीको कुरा मान्दैनौं । कुनै पनि पछाडि फर्कने एजेण्डा बोक्दैनौं । सम्पूर्ण जनतामाझ सिंहदरबारको शक्तिलाई लैजाऊँ भनेर आन्दोलनमा छौं । केन्द्रीकृत शक्ति भत्काउने कुरा हो । हाम्रो विचार एकदमै प्रष्ट छ । यो नागरिक समाजमा हामी युवा, महिला, आदिवासी, थारु, दलित सबै पक्ष छौं । शक्तिकेन्द्रका हिसाबमा हामी कसैसँग छैनौं । आ–आफ्नो स्वतन्त्र जगबाट आवाज उठाइरहेका छौं ।
पहिला बोली त प्रस्फुटन हुनुपर्यो । बोल्ने कुरा त हाम्रो जिम्मेवारी पनि भइसक्यो । १० वर्षदेखि हामी यो मुलुक संकटमा पर्छ भनेर बोलेका थियौं । आजको आन्दोलन त १० वर्ष अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो ।
अब यो आन्दोलनपछि राज्यसत्तामा पुरानै नेतृत्व गएर टुक्रुक्क बस्ने अवस्था आउँदैन त ?
त्यति सजिलोचाहिँ छैन ! जाने त यिनै हुन्, तर नयाँ कोही नगए पनि चरित्र उस्तै हुन हामी दिँदैनौं ।
AUS v IND 2020-21: WATCH – Rishabh Pant hit on elbow while batting; taken to hospital for scans
विकास निर्माणको कार्य गर्दा मजदूरको सुरक्षा मजबुद पार्न आग्रह
झापाको कपास उद्योगमा आगलागी हुँदा १२ लाखको क्षति
Categories Select Category Auto (826) Blog (3) English (1,399) Entertainment (928) Finance (1,941) Nepali (20,395) Sports (13,397) Tech (3,519) World (5,849)